FAQs - Siansa sy Teknolojia momba ny fiarovana ny tontolo iainana Linyi Juda Co., Ltd.
Ary ahoana ny amin'ny famaritana ny vokatra?
Ahoana ny fizotry ny famokarana?
Ny vatosokay sy saribao dia ampidirina ao anaty fitoeram-bokatra amin'ny alàlan'ny forklift. Ny faritra ambany amin'ny fitoeram-pako dia misy hopper milanja mandeha ho azy. Rehefa avy milanja araka ny habetsaky ny solosaina dia afangaro ny vatosokay sy ny arina. Ny fitaovana mifangaro dia aondrin'ny fiara mandingana amin'ny alalàn'ny tetezana mirona mankany an-tampon'ny lafaoro sokay, ary avy eo dia hafafiny ao anaty lafaoro amin'ny alàlan'ny fitaovana enta-mavesatra sy ireo fitaovana fahanana.
Ahoana ny momba ireo fiasa momba ny vokatra?
Ary ny serivisinao?
Serivisy alohan'ny fivarotana: Manome anao ny drafitra prophase izahay, ny famolavolana fikorianan'ny fikorianana ary ny fitaovana mpanamboatra arakaraka ny tinady manokana.
Serivisy amidy: mpanompo Mandefasa teknisiana any amin'ny toeram-piasana amin'ny fitarihana ny fametrahana sy ny fanitsiana, ny mpandraharaha fanofanana ary ny famitana ny fizahana ary hanaiky miaraka aminao.
Serivisy aorian'ny fivarotana: fahatokiana Mba hametrahana finamanana maharitra, dia hiverina hitsidika matetika ny mpanjifa izahay.
Eny. Mpanjifa an-trano sy iraisam-pirenena maro no mitsidika ny orinasa isan-taona.
Mandra-pahoviana ny fiantohana ny fitaovanao? Mamatsy kojakoja fanampiny ve ianao?
Herintaona amin'ny ankapobeny ny fe-potoana fiantohana anay. Afaka manome kojakoja fanampiny isika.
Manome fiofanana momba ny fandidiana fitaovana ve ianao?
Eny. Afaka mandefa injeniera matihanina amin'ny tranonkala miasa izahay mba hampiofanana ny fitaovana, ny fanitsiana ary ny fiofanana momba ny asa. Ny pasiteranay rehetra dia manana pasipaoro.
Ahoana ny amin'ny fandoavana?
30% TT petra-bola, fandoavam-bola 70% mifanohitra amin'ny kopian'ny antontan-taratasy fandefasana tany am-boalohany.
Fitaovana famokarana kalsioma Hydroxide, Manao Hydroxide Kalsioma, Anaran'ny varotra calcium oxide, Fitaovana Hydroxide Kalsioma, Kalsioma oksida sy kalsioma Hydroxide, Famoronana Hydroxide Kalsioma,